Faah Faahin Dilkii Wasiirka Amniga
Faah faahin ayaa ka soo baxaysa gabadha la sheegay inay fulisay dilkii wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee dowladda KMG ah.
Maydka wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga ee dowladda KMG ah ayaa lagu aasay xabaalaha Sheekh Suufi, waxaana soo baxaysa faahfaahin la xiriirta gabadha la sheegay inay fulisay ismiidaamintii lagu dilay.
Gabadha la sheegay inay fulisay ismiidaamintii lagu dilay wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dowladda KMG ah Cabdishakuur sheikh Xasan Faarax, waxaa magaceeda lagu sheegay Haboon Cabdulqaadir Xirsi (Qaaf) oo 22 jir ahayd, Hooyadeedna waxaa lagu magacaabaa Sucaad Cabdulle Qaawane.
Maxamed Aadan oo ka mid ah ehelada wasiirka ayaa VOA u sheegay in gabadha weerarka fulisay uu wasiirku u ahaa abti iyo adeer, qosykeeduna, gaar ahaan waalidkeed ay fajaciso ku noqotay weerarka la sheegay inay fulisay.
Maxamed Aadan wuxuu sheegay in Haboon ay ka qalinjebisay dugsi sare, wasiirkuna uu u diyaarinayay inuu Jaamacad u diro, sidaasi darteedna ay si joogto ah ugu tegi jirtay gurigiisa.
Wuxuu sheegay in ilaalada wasiirku aysan baari jirin gabadhaasi, ka dib markii uu wasiirku amar ku siiyay in aan la baarin, maadaama ay dhowr jeer ay uga dacwootay baaritaanka askarta.
Qaraxa lagu dilay wasiirka waxa uu ka dhacay qolkiisa jiifka abbaarihii 5-tii galabnimo, daqiiqado ka dib markii Haboon ay qolkiisa abbaartay oo ay gudaha u gashay.
Si kastaba ha ahaatee, haddii ay arrintan dhab noqonto waxay noqoneysaa markii ugu horeysay ee dilka mas’uul ka tirsan dowladda loo adeegsado gabar uu waalid ugu aaddan yahay.